Uvavanyo lwe-Covid olufunwa ngamazwe: onke amazwe kunye neemfuno | Iindaba Zokuhamba
ULuis Martinez | 19/04/2021 10:10 | Iingcebiso, ngokubanzi
Yazi i Uvavanyo lomdumba efunekayo kumazwe sele ulwazi olubalulekileyo emva konyaka bhubhane. Unomdla wokuhlala usesikhathini kunye nabo, ngakumbi ukuba kunyanzelekile ukuhamba rhoqo ishishini okanye undwendwele izihlobo.
Kuba isizwe ngasinye sinezinga elahlukileyo lokosulelwa sesi sifo ukusukela izitofu zihamba kancinci, akukho mzekelo uqhelekileyo unokusekwa kwiimfuno eziyimfuneko zokuhamba. Akukwazeki ukuba kwenzeke oku ngaphakathi European Union, abathi ilizwe labo lahluke kwimfuno okanye lokungazenzi iimvavanyo zokundwendwela imimandla yabo. Kuko konke oku, siza kuphononongelela wena iimvavanyo eziyimfuneko zelizwe.
1 Uvavanyo lwe-Covid olufunwa lilizwe: ukusuka kokubalulekileyo ukuya kokucetyiswayo
1.1 Ukuvavanywa kuka-Covid kwi-European Union
1.1.5 I-Netherlands, phakathi kwezona zingqongqo ngokweemvavanyo zeCovid ezifunwa ngamazwe
1.2 Uvavanyo lwe-Covid olufunwa ngamazwe angaphandle kwe-European Union
1.2.1 EUnited Kingdom
1.2.3 ISwitzerland, enye yezona zinto zifunwa ngokweemvavanyo zeCovid ezifunwa ngamazwe
1.2.5 EUnited States
Uvavanyo lwe-Covid olufunwa lilizwe: ukusuka kokubalulekileyo ukuya kokucetyiswayo
Siza kuqalisa uphononongo lwethu neManyano yaseYurophu uqobo, kuba amazwe ayenzayo aphakathi kwezona zindwendwelweyo. Emva koko, siza kuhlalutya imeko kwezinye iindawo zehlabathi, ngakumbi kumazwe afumana elona nani liphezulu labahambi.
Ukuvavanywa kuka-Covid kwi-European Union
Amazwe e-European Union anazo iimfuno ezingqongqo xa usamkela iindwendwe. Ukwanda okunamandla kobhubhane kwiindawo zabo kucebisa ngale ndlela. Ngapha koko, ukongeza kuvavanyo oluhambelanayo okanye kuvavanyo lwePCR, bahlala becela amanye amaxwebhu. Kwixesha elizayo elikufutshane, ikwaqwalaselwa ukumiliselwa Ipasi lokundwendwela. Makhe sibone imigaqo yelizwe.
Khawucinge ngoku España indawo enobungozi obukhulu. Ke ngoko, imilinganiselo yayo kwezona zingqongqo. Ukuba uhambela kwilizwe lethu, kuya kufuneka unikezele nge-PCR egwenxa eyenziwe iiyure ezingama-48 ngaphambi kokufika. Ukongeza, kuya kufuneka ubhalise kwifayile ye- irekhodi yedijithali kwaye, kanye elizweni, gcina a Ukuvalelwa iintsuku ezili-10 ezincitshisiwe zaya ku-5 ukuba wenza uvavanyo olubi lweCovid.
Ayikuvumeli ukubhabha eSpain ngalo mzuzu. Ukuba uyakwenza oko ukwelinye ilizwe, kuya kufuneka uveze into engeyiyo kwi-PCR ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-72 ngaphambi kokufika kwakho. Ngokunjalo kufuneka wenze ifayile ye- ingxelo ebhaliweyo nefungelweyo ukuba awunasifo kwaye ugcwalise a Indawo yabahambi. Okokugqibela, baya kufuna i- Ukuvalelwa iintsuku ezili-7.
I-cycler ye-Thermal okanye umatshini we-PCR
Abamelwane bethu bayasivumela ukuba singene kwilizwe labo, kodwa kuya kufuneka ubonise i-PCR engeyiyo kunye nobudala obungaphezulu kweeyure ezingama-72 kwaye ugubungele ingxelo efungelweyo ukuba awunayo i-Covid. Kwangokunjalo, ukuba unika iimpawu endleleni okanye ekufikeni, kuya kufuneka uzivalele.
Yayilinye lamazwe aqala ukubethwa sisifo kwaye avumela nokungena kwabantu baseSpain. Kodwa, ukuba ufuna ukutyelela imimangaliso enje eRoma o FlorenciaKuya kufuneka uphinde uveze i-PCR engeyiyo eyenziwe kwiiyure ezingama-48 ngaphambi kokuhamba kwaye kuya kufuneka ugcwalise ingxelo efungelweyo ngaphambi kokuqala uhambo. Kwakhona, ukuba unempawu, kuya kufuneka uzikhethe.
I-Netherlands, phakathi kwezona zingqongqo ngokweemvavanyo zeCovid ezifunwa ngamazwe
Njengoko sikuxelela, phakathi kweentlanga ezivumela ukuhamba ukusuka eSpain, le yeyona nto ingqongqo ngokweemfuno. Kuba bakucela kuvavanyo lwe-PCR ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-72 ubudala, kunye nokugcwalisa ifom yovavanyo lwezonyango zombini ekuphumeni nasendleleni ebuyayo nase ezinye iimfuno.
Nangona kunjalo, ukuba ngaphandle kwako konke oku unempawu, ziya kukuthintela ukuba ungangeni kweli lizwe. Kwaye, ukuba ibangela xa ufikile, kuya kufuneka ugcine Ukuvalelwa iintsuku ezili-10.
Ungahamba kwakhona uye kummelwane wethu wasentshona ukuba unqwenela, kodwa uthintelwe ngeendlela ezahlukeneyo. Kuya kufuneka unikezele nge-PCR egwenxa kwaye uyenze kwiiyure ezingama-72 ngaphambi kokungena kwakho elizweni.
Kuya kufuneka uphinde ugubungele ikhadi lendawo yomkhweli Kwaye, ukuba iSpain ikumanqanaba angaphezulu kwama-500 amatyala kubemi abangama-100 (oku akunjalo okwangoku), kufuneka ugcine Ukuvalelwa iintsuku ezili-14. Kwelinye icala, ukuba uya ku Madeira o Azores, baya kukucela ukuba ugcwalise u iphepha lemibuzo lesifo.
Umntu ufumana iyeza lokugonya i-Covid
Uvavanyo lwe-Covid olufunwa ngamazwe angaphandle kwe-European Union
Sifumana iintlobo ngeentlobo zeemfuno kwizizwe ezingezizo ezendawo enye yaseYurophu. Kwamanye amazwe ubungqina abufuneki, kodwa siza kubabeka ecaleni. Masibone ukuba zeziphi ezifuna uhlobo oluthile lweemfuno.
Siqala ngurhulumente osandula ukushiya i-European Union kwaye unelinye lawona manqanaba aphezulu okugonya emhlabeni. Ungayindwendwela ukuba uyafuna, kodwa kuya kufuneka ugcwalise ifom yendawo yabakhweli Ekufikeni kwakho. Ukongeza, kuxhomekeke kumzuzu wesifo esikuyo, unokufuna ukwenza ifayile ye- Ukuvalelwa iintsuku ezili-10.
Kwakhona kweli lizwe, ugonyo luqhubele phambili kakhulu. Nangona kunjalo, ayikuvumeli ukungena kwabahambi abavela eSpain. Kwelinye icala, ukuba ufika uvela kwenye indawo, uya kuba nakho ukungena kweli lizwe, kodwa kuya kufuneka uveze into engeyiyo kwi-PCR eyenziwe iiyure ezingama-72 ngaphambi kokufika kwakho okanye ngomhla osondeleyo kuyo.
ISwitzerland, enye yezona zinto zifunwa ngokweemvavanyo zeCovid ezifunwa ngamazwe
Ilizwe laseSwitzerland lisentliziyweni yelizwekazi elidala kwaye, nangona lingelilo ele-European Union, liyinxalenye yendawo yaseSchengen. Esi sivumelwano siyisusile imida yayo yangaphandle, nangona kunjalo, okwangoku iSwitzerland inemiqathango emalunga nokwamkelwa kwabahambi.
Ungaya kuyo, kodwa kuya kufuneka uveze iPCR engeyiyo eyenziweyo iiyure ezingama-72 ngaphambi kokufika. Nje ukuba ufike, kuyakufuneka wenze ifayile ye- Ukuvalelwa iintsuku ezili-10 Oko kunokuncitshiswa ukuya kwi-7 xa unokufumana enye i-PCR. Kananjalo kuya kufuneka ugcwalise ifayile ye- ikhadi lokulandela umkhondo.
Ilizwe apho ubhubhane uvela khona ngoku linemiqathango emalunga nokwamkela iindwendwe. Ukuba ufuna ukuya eTshayina, kuyakufuneka ubonise iPCR kunye IGM (Ubhaqo lwe-immunoglobulin) olubi olwenziwe kwiiyure ezingama-48 ngaphambi kokufika kwakho. Ukongeza, kufuneka ukuba zenziwe yilebhu ebekwe kwi mhlophe inikezwe ngumzi wommeli welizwe.
Inye le, kuya kufuneka akunike tarjeta kwaye xa ufika eTshayina, kuya kufuneka Phinda PCR kwaye ugcwalise ifom yezempilo. Kwimeko yokuqala eyakhayo, uya kunyanzeleka ukuba upase Ukuvalelwa iintsuku ezili-14.
Ilizwe laseMantla Merika liyakwalela ukungena kummandla walo kubahambi abadlulileyo kwiintsuku ezili-14 ngaphambi kokufika kwakho eSpain. Ukuba uhambela kwelinye ilizwe, kuya kufuneka ukhusele ifom yolwazi kunye ne ingxelo yezempilo ngaphambi kokuba uhambe. Ukwengeza, ilizwe ngalinye linezithintelo zalo.
Ummelwane wethu osemazantsi unqumamisa iinqwelomoya ezisuka eSpain. Kwimeko apho ufika uvela kwelinye ilizwe, kuya kufuneka uveze iPCR engeyiyo eyenzelwe ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-72 ngaphambi kohambo. Ukongeza, kufuneka ibhalwe ngesiFrentshi, isiNgesi okanye isiArabhu. Okokugqibela, xa ufika, baya kukucela eyakho ikhadi lezempilo labakhweli.
Nangona ikwii-antipode zethu, unokufuna okanye ufuna ukuya e-Australia. Kwimeko apho, siya kukuxelela loo nto ayigunyaziswanga eSpain. Ukuba uphumile kolunye uhlanga, baya kukucela ingxelo yokuhamba kwaye unokunyanzelwa ukuba upase Ukuvalelwa iintsuku ezili-14.
Ngaphandle kokuba lelinye lawona mazwe athwaxwe kanobom ngulo bhubhani, iBrazil ikuvumela ukuba uhambe usuka eSpain. Nangona kunjalo, kuya kufuneka unikezele nge-PCR engeyiyo eyenziweyo ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-72 ngaphambi kohambo lwakho kwaye ugcwalise ifom yezempilo.
Ukuba sithetha ngovavanyo olufunekayo lwamazwe ngamazwe, iMexico yenye yezona zinto zifunwa kakhulu. Ukuhamba apho, kuya kufuneka ugqibe umnxeba Iphepha lemibuzo elichonga umngcipheko kubahambi ekufikeni kwakho.
Isizwe seCaribbean, esidibene ngokwembali neSpeyin, sikuvumela ukuba ungene ukuba uvela kwilizwe lethu. Nangona kunjalo, inyanzelekile ngokweemfuno. Kuya kufuneka ubonise iPCR eyenziwe iiyure ezingama-72 ngaphambi kokuhamba.
Ukufika kwakho, kufuneka ugcwalise i isibhengezo sempilo kwaye kunokwenzeka ukuba bakwenze enye i-PCR. Ukongeza, unembopheleleko yokuhlawula i- izinga Iidola ezingama-30 zase-US kwaye, ukuba i-PCR yokugqibela ikhankanyiwe, uya kunyanzelwa ukuba uyithobele ukubekwa wedwa.
Eli lizwe liye lahlaselwa kakubi ngulo bhubhane. Ngapha koko, okomzuzwana uhambo olusuka eSpain aluvumelekanga. Ukuba uyakwenza oku ukwelinye ilizwe, kuya kufuneka uveze into engeyiyo kwi-PCR ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-72 kwaye usayine a ingxelo efungelweyo yezempilo. Okokugqibela, kuya kufuneka ufake isandla ubungqina bokuba unayo i-inshurensi egubungela iindleko zempilo ezinokubangelwa yiCovid kwimeko yokuba usiphuhlisa esi sifo.
Iziko lokufumanisa i-Covid-19 eNew Zealand
Kwakungomnye wamazwe okuqala, emva kweTshayina, ukuba achaphazeleke bubhubhane. Mhlawumbi yiloo nto ingqongqo kakhulu xa usamkela abahambi abavela kwamanye amazwe. Kwimeko yabo baseSpain, Abavumeli ukungena ukuba bachitha iintsuku ezili-14 zokugqibela kwilizwe lethu.
Iindiza ezisuka eSpain zinqunyanyisiwe, ubuncinci, de Epreli 30. Ukuba uhambela kwelinye ilizwe, kuya kufuneka ubonise i-PCR engeyiyo ngesiNgesi kwaye wenze iiyure ezingama-72 ngaphambi kokufika kwakho. Kananjalo unokunyanzelwa ukuba ugcine Ukuvalelwa iintsuku ezili-14.
Ilizwe laseAndes linalo Iindiza ezisuka eSpain azivumelekanga, ubuncinci kude kube phakathi ku-Epreli. Ukuba ufika usuka kwenye indawo, kuya kufuneka uveze iPCR engeyiyo eyenziwe iiyure ezingama-72 ngaphambi kohambo. Kuya kufuneka ulayishe ifayile ye- ingxelo engeyiyo kunye nokugubungela ingxelo efungelweyo yezempilo Kananjalo kwiiyure ezingama-72 ngaphambi kokuba ubaleke esi sixhobo.
Ukuqukumbela, sikwenzele uphononongo lwe Uvavanyo lwe-Covid olufunwa ngamazwe. Njengoko ubona, ukuba ufuna ukuthatha uhambo, uya kuba phantsi kwemida emininzi. Kwaye oku akuyi kuphucula kude kube kugonyo lukhulu. Kodwa ubuncinci unokuqhubeka nokuhamba, ayisiyonto encinci leyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » ngokubanzi » Uvavanyo lwe-Covid olufunwa ngamazwe